BCCI, 'ခိုင်ခံ့တူရကီက' ပူးတွဲထောက်လှမ်းရေး Continues ရွှေ့ဖို့ - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaBCCI, 'ခိုင်ခံ့တူရကီက' ပူးတွဲထောက်လှမ်းရေး Continues ရွှေ့ဖို့
28 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
အများပြည်သူစိတ်ကိုပေါ်ကြက်ဆင်ဆက်လက် BCCI အစွမ်းထက်ရွေ့လျား
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (BCCI), Erzincan မြို့ protocol ကိုနှင့် Corlu စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များဧည့်ခံ။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Erzincan ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွက် Marmara ဝှမ်းမှာရှိတဲ့သစ်တစ်ခုမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု Corlu TSO နှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီး၏ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထား Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်အတူ protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
BCCI ဥက္ကဋ္ဌအီဗရာဟင် Burkay နှင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကလီ Ugur ပါတီများ, Bursa အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂျိမ်းစ် Jumblatt, Erzincan အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလီArslantaş, Erzincan မြို့တော်ဝန် Bekir Aksun, Erzincan TSO ကသမ္မတ Ahmet Tanoğluကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကကြိုဆို, Çorlu TSO ကသမ္မတရာအရပျ Izzet မီးတောင်နှင့်ညီလာခံ၏သမ္မတ, ငါ Noyan ယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း Bursa လက်ထောက် Mustafa Esgin Erzincan လက်ထောက် Suleyman Karaman အဆင်သင့်တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ Erzincan ပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးအခွင့်အလမ်းအဖြစ် BCCI န်ဆောင်မှုများအောက်လွှတ်တော်အတွက်အစီအစဉ်၏နယ်ပယ်အတွင်းဖျော်ဖြေနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးကြ၏။
သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ Bursa အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂျိမ်းစ် Jumblatt, တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဟန်ချက်ညီမျှမက, ယခုသူသည်မြို့ပြပြဿနာများကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ကပြောသည်။ Erzincan အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Jumblatt "Bursa နှင့် Erzincan အကြားဒီခရီးစဉ်ကိုသောအသစ်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသေချာပါလိမ့်မယ်။ " ကြောင်းဖော်ပြထားဟုသူကပြောသည်တစ်ပုံမှန်မြို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အဆင်သင့်
ERZİNCANအဆိုပါ OSB ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြ
လုံလုံလောက်လောက်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးတီး6"ဖော်ပြထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ခြင်း Erzincan သင့်လျော်သောမက်လုံး၏လျှောက်လွှာကြားမှ Erzincan အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလီArslantaş။ မက်လုံးပေးတစ်မြို့ဘယ်မှာအကောင်အထည်ဖော်မှု၌တည်၏။ လည်းအလျားလိုက်မြို့ပြဖြစ်သော Erzincan; ဒါဟာတူရကီအတွက်မြေငလျင်အတွက်အများဆုံးပြင်ဆင်ထားသည်။ OSB တစ်ဦးရောနှော osb'miz ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကဏ္ဍများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်သိမ်းထားချင် Erzincan ၌အကြှနျုပျတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ရန်ရှိသည်။ "သူကဆိုသည်။ Erzincan မြို့တော်ဝန် Bekir အဆိုပါ Aksum အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးရန် BCCI များအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခံခဲ့ရလျှင်။
"ငါတို့ HIGH ENERGY ဖူး"
ဦးတည်ချက်ကအရမ်းကွဲပြားခြားနားသောအရာ Bursa လက်ထောက် Mustafa Esgin, Bursa, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်မြို့တော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုကပြောသည်။ , မြို့တန်ဖိုးကို Esgin ထပ်ပြောသည်ကြောင်းညွှန်ပြ, Bursa, ထိုစီမံကိန်းများကို၏မြင့်စွမ်းအင်အပေါ်လိုက်ပြီ resolution "Bursa Erzincan နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့သည်ကြီးစွာသောအလှူငွေစေမည်ယုံကြည် Corlu နှင့်အတူတည်ထောင်ခဲ့သည်။ " ဟု၎င်းကပြောသည်။
"AN မရှိဘဲနဲ့ကျနော်တို့ CITY သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများ"
လက်ထောက်Süleyman Karaman Erzincan, Erzincan, အရာအားလုံး "ကျနော်တို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာဖြေရှင်းကြတဲ့မြို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အဆင်သင့်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွို့၌ဧညျ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုသူအားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလူတွေကိုချင်တယ်။ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
"ကျနော်တို့ကတူရကီ MODEL စီမံကိန်းဘဝကိုဖြုန်း"
BCCI ဥက္ကဋ္ဌအီဗရာဟင် Burkay, Bursa အဖြစ်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဖွဲ့၏လက်မှတ်တစ်ခါသုံးနှင့်အတူနမူနာစီမံကိန်းများကိုသူတို့တူရကီရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပဏာမခြေလှမ်းတစ်ခုမော်ဒယ်ဖြစ်ဆက်လက်ပြောခဲ့သည်။ ဘုံစိတ်ကို Bursa BCCI ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှု, ပထမဦးဆုံးအရည်အချင်းပြည့်အလုပ်အကိုင်, သူတို့ကနိုငျငံတျောသမ်မ Burkay စီမံကိန်းများနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အနာဂတ်ထမ်းသောတန်ဖိုးကို-added ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တင်ပို့မှု-oriented စံချိန်, "စံပြတူရကီ BCCI နောက်ဆုံးတော့ကျနော်တို့အကောင်အထည်ဖော်ကြပါပြီနှစ်ပေါင်း6များစွာကိုစီမံကိန်းများကိုကလွှမ်းမိုး။ စံပြစက်ရုံ GUHE တူသော TEKNOSAB, အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ OSB, BUTEKOM နှင့်စီမံကိန်းများကိုအသစ်တစ်ခုကိုစက်မှုတော်လှန်ရေးဖို့အကူးအပြောင်းအတွက်စီမံကိန်းများအကြားတူရကီရဲ့သင်္ကေတများအပါအဝင် Bursa နှင့်ဒေသတွင်း၌သာမက our'm ။ "သူကဆိုသည်။
PROGRESS MARMARA တုံ၌အားကောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ
နိုင်ငံတော်သမ္မတသူတို့တူရကီရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းပစ်မှတ် Burkay "Erzincan ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Bursa ရဲ့အသိပညာနဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူရှေးဟောင်း Anatolian ငါတို့မွို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာဏာအမြင့်ဆုံးအလှူငွေပေးရည်ရွယ်ထားကြောင်းဖော်ပြထားသစ်ကိုဂေဟစနစ်များကပေးသောလမ်းညွှန်များ၏မြို့ကြီးများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ, ငါတို့သည်ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်အကောင်အထည်ဖော်တယောက်ကိုခေါ်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ protocols များမှတဦးတည်းကိုပိုမိုဆက်ပြောသည်သောကြောင့်ဒေသတွင်း၌ BCCI မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။ Çorluကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမြန်ဆုံးအကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Marmara ဝှမ်းနိုင်ငံများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍသည်၎င်း၏မဟာဗျူဟာမြောက်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူနောက်ထပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ်။ "သူကဆိုသည်။
BCCI ညီလာခံတွင်နိုင်ငံတော်သမ္မတအလီ Ugur, စီမံကိန်း၏ရူပါရုံကိုလိပ်စာများဖြစ်လာမှာလည်းတူရကီပစ်မှတ်ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်ဟုပျမ်းမျှအထက်မြင့်တက်စီမံခန့်ခွဲသူကို Bursa ၏နိုင်ငံအားလုံးကိုစီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများ, said: "ထုတ်လုပ်မှုနိုင်ငံ့စီးပွားရေး Bursa အတွက်အထူးအနေအထားရှိခြင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများနှင့်စုဆောင်းခြင်းအတွက်အတွေ့အကြုံ, သတင်းအချက်အလက်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်အခြားမြို့များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအခွင့်တန်ခိုးကိုထည့်သွင်းဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ "ဟုပြောသည်။
မဟာဗျူဟာမြောက်ÇORLU, PROTOCOL နဲ့အတူERZİNCANညီနောင်များ
အဆိုပါမိန့်ခွန်းပြီးနောက်, protocol သည် BCCI နှင့် Erzincan TSO အကြားကိုမူလကဖျော်ဖြေညီအစ်ကိုများဖြစ်ခဲ့သည်။ ပရိုတိုကော, အ BCCI နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်အာဗြဟံ Burkay နှင့် Erzincan TSO ကသမ္မတ Ahmet Tanoğluလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ Corlu အဆိုပါ Marmara အင်တုံထဲမှာ Bursa အတွက်အရေးအပါဆုံးထုတ်လုပ်မှုစင်တာများတဦးနှင့်စက္ကူအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသွန်းလောင်းလေ၏။ ပရိုတိုကော BCCI နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကလီ Ugur အီဘရာဟင် Burkay Corlu Corlu TSO TSO ကသမ္မတ Izzet မီးတောင်နှင့်ညီလာခံ၏သမ္မတ, ငါ Noyan လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သြဂုတ်ကျင်းပ Assembly အစည်းအဝေး
BCCI စည်းဝေးပွဲ ROOM တွင်ဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အအုံများ၏သြဂုတ်လအစည်းအဝေးတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပစ်မှတ်ဆီသို့ဦးတည်စိတ်ချလက်ချရွေ့လျားနေကြသည်ဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာအစ္စမေးလ်ငှက်၏ BCCI ဒုဥက္ကဋ္ဌ "အစည်းအဝေးမှာကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မြေတပြင်လုံးပြောင်းလဲနေသောအဖြစ်တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူဖန်တီးစံနမူနာ Speaking, ငါတို့မွို့ 2023, 2053 နှင့် 2071 ။ တမြို့လုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပဏာမခြေလှမ်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ဟာသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပခုံးပြောင်းရွေ့ပါလိမ့်မယ်။ "သူကပြောခဲ့သည်။
Konya ဆာရာယဗေိုနိုင်ဖြစ်ခြင်း၏အစွမ်းထက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် 11 / 07 / 2017 Konya ဆာရာယဗေိုနိုင်ဖြစ်ခြင်း၏အစွမ်းထက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်: AK ပါတီလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Konya လက်ထောက် Ahmet မေးမြန်းမှုနှင့် Konya မြို့တော်ဝန် Tahir Akyürek, ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားလူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ Semiha Borovac ၏ဝန်ကြီးနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Borovac "Konya ဆာရာယဗေို, ဘော့စနီးယားနှင့်တူရကီရဲ့ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိတစ်ဦးအစွမ်းထက်နည်းလမ်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်ခိုင်ခံ့နှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဖြစ်မယ့်အစွမ်းထက်နည်းလမ်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်," ဟု၎င်းကပြောသည်။ ယင်း AK ပါတီလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌမှဦးဆောင်ဖြစ်ရပ်များနှင့် Konya နှင့် Konya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Tahir Akyürekဘော့စနီးယား၏လက်ထောက် Ahmet စုံစမ်းမှုအဘို့အဆာရာယဗေိုနှင့်ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားအတွက်အစည်းအဝေးများတစ်စီးရီးသော Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အစ်မမြို့ ...
BCCI Air လေကြောင်းလိုင်းကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အလုပ်လုပ်မှ Continues 26 / 03 / 2017 လေထုကုန်တင်စစ်ဆင်ရေးစင်တာများအတွက် Sabiha Gokcen လေဆိပ်တည်ရှိပြီးသူထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း: BCCI, Air လေကြောင်းလိုင်းကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အလုပ်လုပ်မှ Continues ။ အဆိုပါ BCCI Akdeniz လေဆိပ်ရဲ့လေကြောင်းကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး A.Ş. ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သူတို့ကဒီလယ်ပြင်၌ခြေလှမ်းများအရှိန်မြှင့်ထူထောင်ခဲ့ဟုဆိုသည်နိုင်ရန်အတွက် BCCI ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်Aytuğဂုဏ်ပြု။ BCCI, အ Merkez လေဆိပ်ရဲ့လေကြောင်းကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များအတွက် Sabiha Gokcen လေဆိပ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများအာဏာပိုင်များအနေဖြင့်စစ်ဆင်ရေးများလည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခံခဲ့ရသည်၏စစ်ဆင်ရေးဆနျးစစျဖို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အမြန်ကုမ္ပဏီ။ ခရီးစဉ်အတွင်းဒါရိုက်တာ BCCI ဘုတ်အဖွဲ့ ...
ဘုံသဘောမျိုးများအတွက်အသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များကို 28 / 10 / 2016 ဘုံသဘောမျိုးများအတွက်အသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ: တစ်ဘုံစိတ်ကို '' နှင့်အတူ IETT ညီလာခံဟာအသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များဆွေးနွေးကြသည်။ အဖွင့်မိန့်ခွန်း, Erzurum ၏ပါမောက္ခအေကေပါတီလက်ထောက်အတွက် ဒေါက်တာ Mustafa Ilıcalıကသူ့ကွန်ဖရ, ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Arif Emecen IETT အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်အသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကအတွက်စီစဉ်ထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဇာတ်ကြောင်း၏တင်ပြချက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ နှင့်အသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များထိရောက်မှုကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှုပါမောက္ခအလေးပေးဆိုလို ဒေါက်တာ Mustafa Ilıcalı "ဤအစည်းအဝေး၏ရလဒ်များအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်ငါကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူလိုအပ်သောညှိနှိုင်းပြုပါလိမ့်မယ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ ဘုံစိတ်ကိုအတူ IETT ညီလာခံက 'Intelligent သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များဆွေးနွေးကြသည်။ အဆိုပါပါလီမန်ပြည်သူ့လုပ်ငန်း, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းမိန့်ခွန်းဖွင့်လှစ် ...
ခိုင်မာတဲ့ခကျြမီးရထားစက်မှုလက်မှုပြပွဲ Eurasia ရထား 2014 မှာတင်ဆက်ပါလိမ့်မည် 03 / 03 / 2014 အဆိုပါ 2014 ခုနှစ်တွင်ချက်ရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း Fair Eurasia: ခိုင်မာတဲ့ခကျြမီးရထားစက်မှုလက်မှုပြပွဲ Eurasia ရထား 6.3 မှာပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ - 9.3 ။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ 20144ခကျြမီးရထားစက်မှုလက်မှု။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားယာဉ်များ, အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲ (Eurasia ရထား) တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအဖြစ်မိတ်ဆက်သည်။ ကုန်သွယ်ရေး၏ချက်သမ္မတနိုင်ငံန်ကြီးဌာန, ထိုရထားလမ်းကားတစ်စီး, ဆောက်လုပ်ရေး, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများစုစုပေါင်း 17 ကုန်သွယ်ရေး, စက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ခကျြအခိုငျအမာ; ရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး, ခေတ်မီ; အချက်ပြ, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှု, တပ်ဆင်ခြင်း, ဝန်ဆောင်မှု၏လယ်ပြင်တွင်သုတေသန; ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံရေး, သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကိုပြခြင်း, ရထားလမ်းအစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားဒေသများရှိအလားတူန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ဥရောပအာရှရထားတူရကီခုနှစ်တွင် ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 29 1926 Samsun-ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
BCCI Air လေကြောင်းလိုင်းကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အလုပ်လုပ်မှ Continues
ခိုင်မာတဲ့ခကျြမီးရထားစက်မှုလက်မှုပြပွဲ Eurasia ရထား 2014 မှာတင်ဆက်ပါလိမ့်မည်
ARUS-HAVELSAN "အစွမ်းထက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စီးပွားရေးဂေဟစနစ်နှင့်တိုးမြှင့်ဒေသခံအကြောင်းအရာ" ကို အသုံးပြု. ခုနှစ်တွင်
E-commerce အစွမ်းထက်အမျိုးသမီးတွေ3။ E-commerce ညီလာခံနှင့်ပြပွဲ